Yaa bixiya darajooyinka Ciidamada Soomaaliya | allsanaag
Yaa bixiya darajooyinka Ciidamada Soomaaliya
Ma runbaa in Qoyska reer Farmaajo ay bixiyaan darajooyinka Ciidamada Soomaaliya.
Maxamed Ingiriis, waa Macalin Jamacadeed oo wax ka dhiga sida uu sheegay Jaamacad ku taal dalka Ingiriiska, waxa uu sheegay baaritaan uu sameeyey inuu ku ogaaday in Xaaska madaxweynaha Soomaaliya ay darajooyinka Ciidamada bixiso, Sidoo kale waxa uu sheegay in Saraakiil ka socda Qaramada midoobey Iyo IGAD ay ka yaabeen sida darajooyinka Soomaaliya loo bixiyo oo Jeneraaladii AY leeyihiin maskaxda laba Alifle.
Warkani hadduu been yahay Qoyska reer Farmaajo xiriir ayeey la samayn lahaayeen jaamacadda uu Maxamed Ingiriis wax ka dhigo oo waa beenin lahaayeen in baaritaankaasi been yahay, oo madaxweynaha xakiisu ayna darajooyinka ciidamada Soomaaliya ayna bixin, ama Qareen ayeey qabsan lahaayeen oo jaamacadda ayeey Maxkamadda la fuuli lahaayeen midna ma dhicin.
Sidoo kale xafiiska IGAD, ayeey ka codsan lahaayeen inaya jiraan saraakiil la kulantay Maxamed Ingiriis oo ka tirsan xafiiska IGAD ee Addis ababa.
Maxamed Ingiris , waa aqoonyahanada beesha Habar gidir kuwooda ugu caansan aadna looga jecel yahay Koonfurta Soomaaliya, hoos ka daawio ,isaga oo leh xaaska madaxweyne Farmaajo ayaa darajooyinka ciidamada bixisa
← Deni oo qaabilay Ku-xigeenka Ergayga Qaramada Midoobey Adeerkiis ayaa na xasuuqay →